Dhexe Dhexe BioAg
Bartamaha BioAg waxay la shaqaysaa wax soo saarayaasha si loo gaaro beerashada ka sii wanaagsan iyada oo loo marayo ciid wanaagsan™. Carruurta caafimaadku waxay yaraynayaan codsiyada nitrogen iyo fosfooriga, u oggolaanaya biyaha nadiifka ah in ay ku daadiyaan Wabiga Mississippi iyo xudduudaha.
$ 5 malyan oo maal-galin toos ah oo lagu maalgelinayo; laga soo bilaabo sannadka 2016
Ganacsiga beeraleyda ah si uu u caawiyo soo saarayaasha waxsoosaarka, kordhiya faa'iidada iyo hagaajinta caafimaadka ciidda. Iyadoo la tixgelinayo in ceelka beeruhu yahay kan ugu weyn ee hawada wasaqda ah ee Mississippi, MBA ee Mashruucan wuxuu si toos ah ugala xiriirayaa ujeedooyinka Barnaamijka McKnight ee ah inuu dib u soo celiyo tayada biyaha iyo adkeysiga Wabiga Nukliye ee Maraykanka.
Waqtiga hore si loo qiimeeyo dhaqaalaha ama dib u celinta deegaanka. MBA waxaa ka go'an cilmi baarista cilmi-baarista ee dhinaca saameynta alaabta iyo adeegyadeeda.
Sanadkii 2017, MBA waxay furtay xarun cusub si ay u soo saarto bacriminta tafaariiqeed ee caadiga ah TerraNu ™. Isku-duubka leh biodigester ka shaqeysa beer wayn oo Indiana ah, waa talaabada ugu dambeysa ee geedi-socodka wareegga ah ee soo noqnoqda xoolaha marka hore noqda tamar ka dibna bacriminta ciidda-kor u qaadaya.
Sannado badan ganacsiga ganacsiga beeraha ayaa ahaa mid heerkiisu sarreeyo, oo ay gacanta ku hayaan dhawr shirkadood oo waaweyn. MBA waxay ku shaqeyneysaa suuq madow oo bixiya waxtarka ku haboon iyo faa'iidooyinka deegaanka oo leh qaab u shaqeyn kara beeraha caadiga ah iyo kan ballaadhanba.